Mayweather Oo Wejiga Ka Qarsaday Feedhyahanka Muslimka ah Ee Khabib Nurmagomedov | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Mayweather Oo Wejiga Ka Qarsaday Feedhyahanka Muslimka ah Ee Khabib Nurmagomedov
(07-11-2018) Feedhyahanka Maraykanka ah ee Floyd Mayweather ayaa wejiga ka qarsaday Khabib Nurmagomedov oo ah feedhyahan Muslim ah oo u dhashay waddanka Ruushka, kaas oo ay ku ballansanaayeen ciyaar feedh ah oo si weyn dunidu u sugaysay.
Feedhyahanka taariikhda soo dhigay ee Floyd Mayweather ayaa aduunka kaga yaabsaday go’aan deg deg ah oo uu ugu soo laabtay saaxada feedhka uu hore uga hawl gabay isaga oo waliba si rasmi ah ugu dhawaaqay ninka uu la gali doono dagaalkiisa 51 aad isaga oo hore u soo guulaystay dhamaan 50 kii dagaal ee uu waayihiisa soo galay.
Laakiin iyada oo la filayay in Floyd Mayweather uu ku dhawaaqi doono dagaalka uu la galayo feedhyahanka muslimka ah ee Khabib waxa uu si lama filaan ah ugu dhawaaqay in uu ka qayb galayo Risin Fighting Federation oo December 31 ka qabsoomo doona magaalada Saitama ee dalka Japan.
Floyd Mayweather ayaa ka soo muuqday shirka jaraa’id ee loogu talo galay in lagu shaaciyay dagaalka dhex mari doona ninka reer Japan ee Tenshin Nasukawa kaas oo isna ah mid taariikh soo sameeyay waxaana hadda si rasmi ah loo shaaciyay goobta layskugu xaryn doono Mayweather iyo Tenshin Nasukawa.
Shir jaraa’id oo ay Myweather iyo Tenshin Nasukawa si wada jir ah ugu qabteen magaalada Tokyo ee dalka Japan ayay si rasmi ah ugu dhawaaqeen in December 31 ay ku kulmi doonaan Saitama Super Arena oo ku yaala magaalada Saitama ee dalka Japan.
Floyd Mayweather ayaa hore u aqbalay dalab uu ka helay Khabib oo dhawaan ka soo guulaystay McGregor laakiin iyada oo rabashadii ay sameeyeen lagu haysto Khabib waxa uu Floyd Mayweather go’aan ku gaadhay in uu marka hore dagaal la sii galo Tenshin Nasukawa oo Japan u dhashay.
Laakiin waxaan wali la shaacin faah faahinta nooca dagaalkan maadaama oo Tenshin Nasukawa uu yahay nin ka tirsan dagaalka feedhka iyo laaga iskugu jira waxaana la filayaa in uu noqon doono mid ku koobnaan doona dagaal feedh kaliya ah maadaama oo Myweather uu waayihiisa ku soo qaatay feedh kaliya.
Tenshin Nasukawa ayaa tilmaamay in uu galayo dagaalkii taariikhdiisa ugu waynaa laakiin waxa uu ku hanjabay in uu samayn doono feedh taariikhda badali doona isaga oo doonaya in uu noqdo ninkii abid ugu horeeyay ee ka guulaysta Myweather.
Inkasta oo uu khibrad wayn leeyahay Myweather, haddana waxa uu saaxada feedhka ka maqnaa tan iyo sanadkii 2017 kii markii uu ka guulaystay McGregor laakiin markan waxa uu doortay halis wayn isaga oo balan cad December 31 ka samaystay ninka reer Japan ee Tenshin Nasukawa.
Waxaa haddaba lays waydiinayaa haddii Myweather uu dagaalka Tenshin Nasukawa kadib isku diyaarin doono balantii Khabib kaas oo December 10 isna go’aan laga gaadhi doono rabshadii ay ka sameeyeen kulankii McGregor waxaana la ogaan doonaa haddii ganaax dheeraad ah lagu soo rogi doono.